7days ကပြောထားတဲ့ အတူတူ နေ ထောင်ဒဏ် (၅) နှစ်ဆိုတာ မဟုတ်ကြောင်း ယူဆချက်မှားနေကြောင်း ဦးအောင်မျိုးမင်းပြောဆို.... - Myanmarload
7days ကပြောထားတဲ့ အတူတူ နေ ထောင်ဒဏ် (၅) နှစ်ဆိုတာ မဟုတ်ကြောင်း ယူဆချက်မှားနေကြောင်း ဦးအောင်မျိုးမင်းပြောဆို....
လွန်ခဲ့သော ၃ နှစ် က 19:15 December 29, 2016
ကြားထဲကနေ ဖြေရှင်းပြပါရစေ...အတူနေ ထောင်ဒဏ် (၅) နှစ်ဆိုတဲ့ ဥပဒေအကြောင်း ဖေ့ဘွ်တခွင် ပွက်လောရိုက်နေတဲ့အချိန် ကိုယ်က နယ်ရောက်နေလို့ သေသေချာချာထဲထဲဝင်ဝင် မပြောဖြစ်ဘူး..အခု အချိန်ရနေတော့ နည်းနည်းတော့ ဝင်ပြောပါရစေ..
အမှန်တော့ ဒီသတင်းထောက်တွေ အင်တာဗျူးလုပ်ထားတဲ့ပွဲက ဒီဇင်ဘာ (၂၇) ရက်နေ့က ကျင်းပခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးရေးရာကော်မတီအစည်းအဝေးပွဲဖြစ်ပါတယ်.. ပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာကြောင့် အရပ်ဖက်လူ့အဖွဲ့အစည်းကိုယ်စားလှယ်တွေအပါအဝင် တာဝန်ရှိသူတွေ စုံစုံညီညီတက်ရောက်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်.. ဒီပွဲမှာ တက်ရောက်တဲ့သူတွေကို ဟိုတစ ဒီတစ လိုက်ဗျူးပြီး ထင်သလို ကောက်ချက်ဆွဲရေးသားတာ တွေ့ရပါတယ်..
ပထမဦးဆုံး ဒီအစည်းအဝေးဟာ အမျိုးသမီးရေးရာကို ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပြီး ဘယ်လို ရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်မလဲ ဆွေးနွေးတဲ့ပွဲသက်သက်ပါ.. ဒါပေမဲ့ သတင်းထောက်က ဒီပွဲကို တက်လာသူတွေကို ဥပဒေအကြောင်းမေးမြန်းသတင်းလုပ်လိုက်တာပါ.. ဒီပွဲဟာ အခုပြောနေတဲ့ အတူနေ ထောင်ဒဏ် (၅) နှစ်ကို ဆွေးနွေး၊ တင်ပြ၊ ပြဌာန်းဖို့ လုပ်တဲ့ပွဲ လုံးဝ မဟုတ်ပါဘူး..
ဒုတိယကတော့ သတင်းထောက်က ဥပဒေ.. ဥပဒေဆိုပြီး ပြောသွားပါတယ်.. သတင်းထောက်အနေနဲ့ ဘာဥပဒေကို ရည်ရွယ်ပြီး မေးလိုက် ရေးလိုက်လုပ်နေတာဆိုတာ မသိပေမဲ့ ဖြေကြားသွားတဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေ ရည်ရွယ်ပြောကြားသွားတာကတော့ နှစ်နှစ်လောက် ပြင်ဆင်ရေးဆွဲနေတဲ့ “အမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှု တားဆီးကာကွယ်ရေး ဥပဒေ” (မူကြမ်း) ဖြစ်ပါတယ်.. မြန်မာနိုင်ငံဟာ နိုင်ငံတကာ အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးစာချုပ် စီဒေါကို လက်မှတ်ရေးထိုးထားပေမဲ့ နိုင်ငံတော်အဆင့် အမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှု တားဆီးကာကွယ်ရေးဥပဒေမရှိသေးပါဘူး.
ဒါကြောင့် ဒီလိုဥပဒေတရပ်ရေးဆွဲပြဌာန်းနိုင်ဖို့ ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့ အခုဆို မူကြမ်းအဆင့်ပေါ်လာပါပြီ.. အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပြင်ဆင်မှုတွေ အမျိုးမျိုးလုပ်ဆောင်ခဲ့ရပေမဲ့ မကြာမီမှာ လွှတ်တော်အတွင်း တင်ပြဆွေးနွေးပြီး အတည်ပြုနိုင်တော့မှာပါ.. ဒီအင်တာဗျူးမှာ ဖြေထားတဲ့ ဒေါ်နေသဝါးတို့ ဝန်ကြီးဒေါက်တာ ဝင်းမြတ်အေးတို့ ရည်ညွန်းပြောဆိုသွားတဲ့ “ဥပဒေ” ဆိုတာ “အမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှု တားဆီးကာကွယ်ရေး ဥပဒေ” ကိုသာ ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်.. သတင်းထောက် အမည်တပ်ထားတဲ့ “အတူနေ ထောင်ဒဏ် (၅)နှစ်” ဆိုတဲ့ ဥပဒေမဟုတ်ပါဘူး.. ဒီလိုဥပဒေမျိုး ပြဌာန်းဖို့လဲ အစီအစဉ်မရှိကြောင်း သိရပါတယ်.
တတိယကတော့ ဒီလိုဥပဒေမရှိဘဲ လက်မထပ်ဘဲ အတူနေရင် ထောင်ဒဏ် (၅) နှစ်က ဘယ်လိုပေါ်လာရသလဲဆိုတဲ့အချက်ကို ရှင်းချင်ပါတယ်.. အမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှု တားဆီးကာကွယ်ရေး ဥပဒေကြမ်းကို အခုအချိန်အထိ အတည်မပြုရသေးပေမဲ့ အပြစ်ဒဏ်တခုမှာ မည်သူတဦးတယောက်ဖြစ်ဖြစ် အမျိုးသမီးတဦးကို လက်ထပ်မယ်လို့ ယုံကြည်အောင် ပြောဆိုပြီး ကာမရယူပြီးမှ လက်ထပ်ဖို့ ပျက်ကွက်ရင် ငြင်းဆန်ရင် ပြစ်မှုထင်ရှားပါက ထောင်ဒဏ်
အနည်းဆုံး (၃) နှစ်ကနေ (၅) နှစ်အထိ ချမှတ်နိုင်တယ်။ ငွေ ဒဏ်လဲ ချမှတ်နိုင်တယ်လို့ ရေးထာတာပါတယ်လို့ မှတ်သားမိပါတယ်… ဒီအပိုဒ်ကို သတင်းထောက်ကနေ “ လက်မထပ်ဘဲ အတူနေရင် ထောင်ဒဏ် (၅) နှစ်ချမည်” လို့ ဘာသာပြန်လိုက်တာလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်.. အမှန်တော့ လိမ်လည်ကာမရယူတာဟာ ရာဇဝတ်မှုဖြစ်ပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ ပိုမိုလေးနက်အောင် ထပ်ထည့်ထားတာပါ.. လိမ်လည်ခံရတဲ့ အမျိုးသမီးများကို ကာကွယ်ပေးတဲ့ ရှိသင့်သောအပိုဒ်ဖြစ်ပါတယ်..
ဒီဥပဒေကြမ်းထဲမှာ လက်မထပ်ဘဲ အတူနေရင် ယောကျာ်းလေးကို ထောင်ဒဏ် (၅) နှစ်ချမယ်ဆိုတာ သတင်းထောက်က လိုရာဆွဲရေးပြီး သေချာစွာရှင်းလင်းစွာ မေးမြန်းရေးသားထားတဲ့အပေါ် စာဖတ်သူတွေ အဓိပ္ပာယ်ကောက်လွဲနေတာဖြစ်ပါတယ်..သတင်းသမားတယောက်ရဲ့ အကြောင်းအရာအပေါ် သေသေချာချာလေ့လာတာမရှိဘဲ တာဝန်မဲ့ရေးသားခြင်းက အကျိုးဆက်တွေပါဘဲ..ဥ့ပေးကို ကိုးကားတဲ့အခါမှာ ဘယ်ဥပဒေကို မေးမှန်း၊ ဖြေမှန်းမသိဘဲ ကိုယ့်အဓိပ္ပာယ်နဲ့ ကိုယ်မေးနေ၊ ဖြေနေတော့ ပိုပြီး ရူတ်ထွေးစေကုန်တာပါဘဲ..